Volkswagen ရဲ့စိတ်ကို Bursa အတွက်နေထိုင်ခဲ့ | RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaVolkswagen ရဲ့စိတ်ကို Bursa အတွက်မှီခိုရာဖွစျ
Volkswagen ရဲ့စိတ်ကို Bursa အတွက်မှီခိုရာဖွစျ
05 / 09 / 2019 16 Bursa, 45 Manisa, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
Volkswagen ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ bursa ကျန်ရစ်
ပထမဦးဆုံးရှင်းပြချက် ... အတိတ်ကာလ, အရာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် AK ပါတီ Bursa လက်ထောက်ပါလီမန်ကလူ့အခွင့်အရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ Hakan Cavusoglu ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျနော်တို့လည်းငါတို့ဖေဖော်ဝါရီလ 27 2019 အတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်င့်သဲလွန်စကိုရှင်းပြ:
"ဥရောပကအကြီးဆုံးမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ Bursa အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံတည်ဆောက်ရန်လိုသည်။ ဒါဟာမိမိနေရာမှဆုံးဖြတ်ရန်အလုပ်ကြာတယ်။ "
31 မတ်လကျနော်တို့ဧရာ Volkswagen ကမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများမျှဝေနေပါသည်ကမ္ဘာကြီးကိုဒီစာမျက်နှာကနေအောက်ပါလိုင်းများနှင့်အတူနေဆဲဖြစ်ပါတယ် said:
ကမ္ဘာကြီးကိုမော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးအကြားတည်ရှိသော Volkswagen ကလည်းမှုကြောင့်ကားများထုတ်လုပ်ရန်စက်ရုံစီမံကိန်းများ၏အခြေခံအဆောက်အအုံဖို့တူရကီအတွက် Bursa အတွက်လုပ်ဖို့လိုသည်။
ဒီဦးတည်ချက်အတွက်တချို့ကခြေလှမ်းများကို တင်. နှင့်ရှာပုံတော်စတင်ခဲ့သည်၌အကြှနျုပျတို့၏နားဘယ်မှာသင့်လျော်သောအသံများကို Bursa အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအဆက်အသွယ်ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။
သူကဗဟိုနှင့်နီးစပ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်အာရုံစိုက်ရန်ပြောပြီဖူးပင်ပြီးနောက်, teknosab မီးမောင်းထိုးပြကြောင်း Bursa အတွက်စက်ရုံရှာဖွေရေးတည်နေရာအစမပြုမီ။
İzmirTorbalı Volkswagen ကအတွက်သမ္မတအိမ်တော်ရုံးအလီ Ermut ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဦးခေါင်းထုတ်ဝေယခင် Opel အကျင့်ကိုကျင့်အကြံပြုကြောင်းအစီရင်ခံစာများအညှနျး။
19 လွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ဇွန်လအတွက် Volkswagen ရဲ့မော်တော်ကားအခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေး Bursa ကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြောင်းအလေးအနက်။
အဆိုပါထိုင်ခုံပြီးနောက်တူရကီ-ဘူလ်ဂေးရီးယား-ရိုမေးနီးယားမတိုင်မီအကြားဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းနှင့် Skoda Volkswagen ရဲ့လိပ်စာ Manisa ခဲ့မော်တော်ယာဉ်များထုတ်လုပ်ရန်တူရကီမှရှေးခယျြ
၏သင်တန်းထိရောက်သော routing ။ အရေးအပါဆုံးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာသောလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်:
"Bursa နှစ်ခုအဓိကကားတစ်စီးထုတ်လုပ်သူစက်ရုံရှိပါတယ်။ အဆိုပါအဆိုးမြင်အတွေးတွေမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူထေိုငျစက်ရုံတွေအကြားယှဉ်ပြိုင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌တတိယရှိရာသို့လာလျှင်။ "
န်ထမ်းများနှင့်ပေးသွင်းဆိုးရွားစွာကြောင့် Bursa အတွက်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူဆင်ခြင်တည်ဆဲစက်ရုံများ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် Manisa အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာတစ်ခုအဖြစ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Bursa စီးပွားရေးအတွက်အလွန်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်, သို့မဟုတ်ပါကတမြို့လုံး၏အကြိုးအတှကျခဲ့, ကအချိန်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ (Ahmet Emin Yılmaz)
IMM က 'metrobus ခရီးသည်သည်အမ်စတာဒမ်လူ ဦး ရေနှင့်တူညီသည်' ဟုပြောကြားခဲ့သည်
Kentkart တည်သော နေ့မှစ. ထိုမြို့ကို '' ထောက်လှမ်းရေး '' အတွင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Izmir Metropolitan "နာကျင်သောနေ့၌လေယာဉ်ဖြင့်အသုဘ ...
စိတ်စမတ်လမ်းများဆုပေးပွဲ Winners ၏လမ်းကြောင်းကို
Gaziantep လေဆိပ် Temiz
နှုတ်ဆက် Kocaeli 511 လေယာဉ်နောက်ဆုံးခရီးအတွက်အသုဘရှိသည်
Bursa ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း Truck ကားများ Erzurum မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး
Bursa Cableway အတွက်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘို့အရက်စွဲထိုးမြဲလက်မှတ်Atıldı
ကျောင်းသားများ Bursa အတွက် LYS အခမဲ့ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝင်ပါလိမ့်မယ်
Bursa အမျိုးသမီးများအတွက်သီးခြားရထားတုံ့ပြန်အထူးကြပ်မတ် applications များ
အစိုးရက Bursa ကိုYıldırım Metro အတွက်ကတိပြုသည်။